Kedu ọkwa ole dị na Giro d Italia? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Giro d italia nkebi - otu esi edozi
Giro d italia nkebi - otu esi edozi
Kedu ọkwa ole dị na Giro d Italia?
Giro d'Italia, otu n'ime nnukwu njem atọ dị ukwuu. Ma gịnị kpatara agbụrụ a nke nwere izu atọ a siri ike? Gini mere oge dika nke a ji ebili? Ma nke a? Ọ dị mma, n’isiokwu a aga m agbaji ya ka anyị nwee ike ịghọta ihe kpatara agbụrụ a ji wee bụrụ akara ngosi, mana n’ikpeazụ bụrụ obi ọjọọ. Ugbu a, m na-etinye na m GCN Italy Giro T-shirt.
Ee, nwee obi ụtọ na ya. A mụrụ Giro d'Italia na 1909 ma yie Tour de France, ọ bụ ebe ahụ iji kwalite akwụkwọ akụkọ akpọrọ La Gazzetta dello Sport, nke pụtara n'ụzọ nkịtị 'Akwụkwọ akụkọ egwuregwu'. Ọ bụ ọkachamara nke onye editọ na-eto eto aha ya bụ Tullo Morgagni na akwụkwọ akụkọ na-asọ mpi, ndị Corriere della Sera, tiri ya ihe.
Na August 1908 a mara ọkwa na Giro d'Italia ga-eme. Yabụ na Mee 13, 1909, mbipụta mbụ nke Giro ga-esi n'otu n'ime obodo ukwu Italytali - ee, Milan. Ma ọ bụ Milan.
Mbipụta mbụ nke Giro d'Italia bụ 2,447 km ogologo. E kewara ya na usoro 8, site na Milan ọ gafere Chieti, Naples, Rome, Florence, Genoa, Turin ruo Bologna ma gwụchaa na Milan. Ogologo ọsọ ọsọ a bụ kilomita 28 ma ọ jọgburu onwe ya! Nke ahụ na-egosi n’ezie ọnụọgụgụ ndị debanyere aha na ọnụ ọgụgụ ndị ọkwọ ụgbọala gafere akara ngwụcha. Ndị ọkwọ ụgbọ ala 166 bịanyere aka maka agbụrụ a ma naanị 49 mere ya na Milan.
Nke ahụ na-egosi n'ezie etu o si bụrụ obi ọjọọ. Site na mmalite, Giro d'Italia enwetala aha maka ịbụ onye obi tara mmiri, nke nyere ya nnukwu ewu ewu. Ọtụtụ mmadụ na-achọ inweta ndị Giro, ụfọdụ na-ekwukwa na n'ime afọ ole na ole, ọ nwetala ugwu nke Tour de France.
Ọtụtụ mmadụ n'ụwa niile chọrọ itinye aka ha na Maglia Rosa a. Ugbu a, enwere ezigbo ohere ị nụrụ banyere Maglia Rosa, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala hụ ihe oyiyi ịgba ịnyịnya ígwè nke onye na-agba ịnyịnya nke na-eyi ụdị agba pink ndị ahụ. E mepụtara Maglia Rosa na 1931, na agba ndị a na-acha uhie uhie bịara n'ihi na akwụkwọ akụkọ La Gazetta bụ pink ka o wee nwee ike iguzo na shelf, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ pụta ìhè.
A na-enye Maglia Rosa onye isi agbụrụ ahụ. Onye ọkwọ ụgbọ ala nke mechara ụzọ niile na ụzọ niile n'oge kachasị dị mkpirikpi meriri Maglia Rosa, onye mmeri niile. Gịnị mere o ji esi ike? Gịnịkwa mere e ji asọpụrụ Maglia Rosa nke ukwuu? Mgbe ị na-elele map nke it'stali ọ na-esiri gị ike ịhapụ ugwu ndị ahụ - Alps, nnukwu agbụ na nke ka elu nke na-ekewapụ peninshula site na ndị agbata obi ya: France, Switzerland, Austria, na Slovenia - ndị a abụghị obere ugwu, ụfọdụ n'ime ugwu kachasị elu dị nso na mita 5000.
Dị ka ugwu ahụ a ma ama, na Monte Bianco, mgbe ahụ, enwere ugwu Apennine. Ọ bụghị nke ahụ dị elu, mana ọ ga - abụrịrị oge Alps. ma saa mbara, na-ekewa peninshula ahụ ụzọ abụọ.
Ugwu ugwu ndị a bụ akụkụ bụ isi nke ọdịdị ala ,tali, ọdịnala Italiantali, mana ihe ka ọtụtụ n'ime ha bụ akụkụ dị mkpa nke agbụrụ Italytali a ma ama. Ugwu ndị a aghọwo coliseum maka asọmpi ịgba ịnyịnya ígwè a ma ama. Ndị na-egwu egwuregwu a na-enuga n'ugwu ahụ iji lelee ndị dike ha ka ha na-alụ ọgụ na mkpọda ugwu, na -emepụta ikuku dị ka ndị ọzọ.
Nke a bụ ebe asọmpi agbụrụ ahụ wee funahụ, nke a bụ ebe ị nwere ike ịga nweta ọtụtụ oge, mana n'aka nke ọzọ, ee, ị nwekwara ike ida ọtụtụ. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, usoro ugwu ejiriwo otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ụzọ Giro dum na nnukwu, ọtụtụ na ugwu kachasị ike dị ka nke Queen bụ na njedebe nke izu atọ, ma ọ bụ ebe a ka agha maka Maglia Rosa ghọrọ oke iwe. Ihu igwe na-ekerekwa òkè dị ukwuu n'ime ka agbụrụ a bụrụ agbụrụ maka ụmụ nwoke siri ike.
Enwere ezigbo ohere na ihu igwe na-adịghị mma ga-adakwasị ndị na-agba ịnyịnya n'oge ụfọdụ n'okporo ụzọ ahụ, ọkachasị mgbe ị na-anya ugwu. Obere okpomọkụ, snow, snowet, ọbụna oké mmiri ozuzo ga-emetụta ndị na-agba ịnyịnya mgbe ọ bịara n'elu. Ma olee otu anyị ga-esi echefu ebe ahụ a na-akpọ Galibier snowy 2013 na Giro d’Italia? Ọsọ ọsọ a abụghị ihe siri ike na-enweghị ajọ ihu igwe na-abanye ọ bụghị naanị ihe siri ike maka ndị mgba GC.
E webatara Maglia Rossa, uwe na-acha uhie uhie, na mgbe e mesịrị Ciclamino na 1966. E nyere ya ndị na-agba ọsọ ma dabere na usoro isi ihe dị iche na Maglia Rosa. Nke a kere asọmpi na asọmpi ya mere ọ bara uru ịlụ ọgụ maka ọkwa dị larịị, nke na-apụtaghị ụbọchị dị mfe.
Ewepụghị ụbọchị ghọrọ ihe nzuzu ma ọ gaghị ekwe omume ndị na-agba ịnyịnya izu ike. Ee, ọ bụghị ụbọchị ezumike, ọ bụghị ụbọchị dị mfe, nke pụtara agbụrụ a mana amaara m ihu ole m maara nwere.
Gini mere Giro d'Italia ji sie ike? Nri, gịnị kpatara Giro ji sie ike? Echere m echiche banyere Giro taa, m lere anya na akwụkwọ ịgba ọsọ ochie na enwere m nọmba ochie m ebe a, ka anyị lee ma m nwere ike igosi gị nke ahụ. Ka anyị gaa 114, echere m na ihe kpatara ya bụ na ọ siri ike n'ihi na ịrịgo na Italytali bụ ndị obi ọjọọ, ha dị oke elu, ọfụma bụ naanị Giro dị ogologo - usoro a dị ogologo, mana ndị na-enyefe ya? Echetara m na ụbọchị ụfọdụ anyị nwere ike ibili n'elekere isii ma echetara gị na anyị riri nri abalị n'etiti abalị n'otu ụbọchị ahụ. Emeela m Giro d'Italia ugboro ise ma echere m na agbụrụ a siri ike n'ihi na anyị nwere ọtụtụ ogologo na mgbago ugwu na Italytali.
Nke abụọ bụ na ị nwere ike ịchọta ọtụtụ okporo ụzọ dị warara na Italytali. Na peloton ị nwere ike ịhapụ nrụgide ahụ n'ihi na onye ọ bụla chọrọ ịnọ n'ihu naanị iji jide n'aka na echere m na Giro bụ agbụrụ siri ike maka ihe abụọ ahụ. Gini mere Giro ji sie ike? Ana m agwa gị n'ihi na n'ikpeazụ ihe niile bụ nnukwu ọgba aghara.
Ọ bụ nnukwu ngosi, nnukwu ememme, onye ọ bụla na-awakpo ibe ya na ị maghị ihe ị ga-atụ anya ya. Okporo ụzọ ndị ahụ ezughị oke na onye ọ bụla na-eche izu gara aga na Dolomites. Nnukwu anụ mmiri, 250km ogologo, njem ise, na nke ahụ kwa ụbọchị - nke ahụ bụ Giro! Ọ bụ ejighị n'aka ruo n'ókè na nke ahụ bụ ihe na-eme ya otú pụrụ iche na oké.
Gini mere Giro ji esi ike? Ebe ọ bụ na enwere ogologo oge dị ogologo ma na-agbago ogologo ma na-agbasi ike, nke abụọ m na-eche, ị maara, ọ bụ nke mbụ Grand Tour nke afọ, na onye ọ bụla nwere ezi mkpali ịnwale ihe dị mma, ihe The Maglia ciclamino dị ezigbo mkpa maka mmadụ niile ọkwọ ụgbọala, na ihe mere ha Sprint ọ bụla akara na-agbalị iji nweta a mgbe na n'isi. Ọ bụ ya mere na anyị enweghị udo n'ezie. Know mara, Echere m na Giro d'Italia bụ ihe siri ike karịa na Grand Tours niile.
Echere m na ihe mere Giro d'Italia jiri sie ike karịsịa nye m bụ na onye ọ bụla ọzọ nọ n'ọsọ ahụ kaara mma, nke na-eme ka o sie ike ijide ya, ị maara nke ahụ. Ma e nwere ndị a ole na ole obi ọjọọ nkebi nke mbụ Giro, nke m nọkwasịrị na 2009, 240 km, ogologo ụbọchị na sadulu. Ma onye ọzọ nke m chetara n'ezie - ọ bụ 'naanị' 237 kilomita na ogbo 16, mana ọ bụ n'ugwu ma ọ bụ ụbọchị na-elu ilu.
Ọ dị ụtọ n'ihi na onye otu m Carlos Sastre meriri, kesara ego nrite, mana obi ilu n'ihi na o were ya awa asaa na nkeji iri na abụọ iji merie. N'ezie, anọ m azụ na nke mbụ nke grupettos n'okporo ụzọ, nkeji iri anọ iji bụrụ eziokwu, yabụ awa 7 na 50 nkeji na sadulu m. Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, nkeji iri n'azụ m bụ Grupetto nke abụọ.
Na elu ya, anyị ga-agbada n'ugwu ahụ gaa bọs ndị otu anyị, mgbe ahụ, a ga-ebufe awa anọ na họtel ọzọ. Echetara m ya n'ụzọ obi ọjọọ, echefuru m ọtụtụ ihe mgbu, mana ụfọdụ ihe ka dị ebe ahụ e. Ọ dịghị agbụrụ dị mfe, yabụ ebe ahụ ka inwere ya - Nnukwu Ntugharị kacha sie ike na kalenda ịgba ígwè? Mee ka anyị mata ihe ị chere banyere agbụrụ a mara mma na nkwupụta ndị dị n'okpuru ebe a, yabụ gaa ebe ahụ ma tụọ vootu.
Kedu ihe anyị chere maka uwe Giro m?
Kedu ụzọ Giro d Italia?
Dị ka ndị ọzọ Grand Njegharị, n'oge a mbipụta nkeNjem Italytaliejikari 21nkebikarịa oge 23 ma ọ bụ 24 nke gụnyere ụbọchị izu abụọ ma ọ bụ atọ.
Ndi Giro siri ike karịa Tour de France?
IheTụgharịaabụghị ihe ọ bụbu. Otu n’ime ihe ndị kacha mee ka okpukpu abụọ sie ike bụ naGburugburu d'Italia bu ugbua otutuSiri nnukwu ikeagbụrụ, ma n'ụzọ anụ ahụ ma n'uche. Laa azụ n'ụbọchị, awa mbụ ma ọ bụ karịa nkeTụgharịagbara ọsọ, dịka ndị anstali na-akpọ ya, 'tutto piano,' n'ọsọ nwayọ nwayọ karịaNjegharị.
Onye nwetara 2020 Giro d Italia?
Ebee ka Giro d'Italia na-amalite?
IheGburugburu d''.Tali2021 na-aga n'ihu,amalitena Satọdee 8th Mee na Turin. Ọ ga-aga n'ihu ruo ụbọchị ụka 30 nke Mee, ebe ọ ga-agwụ na Milan. Ọ bụrụ na ọ bụ ebe nkịtị iji kwuoTụgharịana-arụpụta ọduọ a na-atụghị anya ya karịa njemsite naFrance, mbipụta nke 2020 gara ezigbo ụzọ iji gosipụta ya.
Kedu oge Giro d'Italia 2020?
Malite na Turin na oge 9km dị mkpirikpi-ikpe, usoro 21 ya ga-amalite site na isi ala etiti mba ahụ tupu ịmalite Milan maka ikpe ikpe ogeebeeGeoghegan Hart were Maglia Rosa n'afọ gara aga.
Kedu Giro d'Italia na Tour de France?
Ndị Giro d'Italiaa na-agba ọsọ n'ozuzun'imeMee,na Tour de France naJuly, naiheLaghachi Spainn'imengwụsị August na Septemba.IheEmeburu Vueltan'imeopupu ihe ubi, na-abụkarị ngwụsị Eprel, nwere mbipụta ole na olen'imeJunen'ime1940s.
Kedu nke bụ njem kacha sie ike?
Vuelta ebe n'ụzọ ụfọdụ kachasị mfe bụ n'eziokwu ma ọ dịkarịa ala nha anya nke Giro na ike siri ike na m ga-enye ya Vuelta n'ozuzu ya dịka ọ meworo ka ọtụtụ ihe nwee ọganihu n'inwe ọhụụ. Gaa Vuelta, ị bụkasị sie ike Grand Tour.
Wonnye meriri Giro taa?
Ise ise si oge mbụ grand tour. Egan Bernal nke Colombia (INEOS Grenadiers)merieOgbe 2021Tụgharịad'Italia na Milan, Italy, na Sọnde, bụrụ naanị onye Colombia abụọ nkemeriennukwu njem ndị Italiantali.June 1. 2021
Wonnye meriri Giro d'Italia nke mbụ?
Na 13 May 1909 na 02:53 am 127 ndị na-agba ịnyịnya maliterembụ Giro d'Italiana Loreto Ebe dị na Milan. E kere agbụrụ ahụ ụzọ asatọnkebiekpuchi 2,448 km (1,521 mi). Ngụkọta nke ndị na-agba ịnyịnya 49 gwụchara, onye Italiantali bụ Luigi Gannana-emeri.
Ebee ka agba nke abụọ nke Giro d'Italia dị?
Satọdee 8 Mee - Giro d'Italia meghere site na ịnwale oge nke onye nke 8.6 kilomita na Turin. Zọ a na-aga n’ikperé mmiri nke osimiri Po ya bụ kpam kpam. Sọnde 9 Mee - Na 179 kilomita, 2nd ogbo nke Giro d'Italia na-agafe na ndagwurugwu Po site na Stupinigi ruo Novara.
Ego ole ka e nwere na Giro d'Italia?
Rịgo bụ n'ezie ihe na-ada ụda maka asọmpi nke afọ a na nkebi nke isii, asatọ na itoolu na-ewere ihe karịrị mita 3,000 nke uru dị elu. KWES VIDR VID KWURU B FORR YOU nye Gị Ejiri Sketch kee ya.
eme ịnyịnya ígwè ga-akwụsị na akara nkwụsị
Onye bụ onye mmeri nke Giro d'Italia 2019?
Ọnọdụ penultimate ga-eweta gruppo si Alba na Sestriere site n'ụzọ dị ike nke Colle dell'Agnello, Col d'Izoard na Col de Montgenèvre. Giro 2019 meriri Richard Carapaz, onye jidere maglia rosa mgbe o kwusịrị mmeri na Courmayeur.